Ultrabook စံနှုန်းကို ရိုက်ချိုးပစ်ဦးမယ့် Intel Project Athena ဆိုတာဘာလဲ? - PX
Project Athena ဆိုတာ Intel ရဲ့ အနာဂတ် Processing နည်းပညာပါ။ “Rooted in Human Understanding” လို့သုံးနှုန်းထားတဲ့အတိုင်း Processor ၊ Chipset စွမ်းဆောင်ရည် ထပ်တိုးလိုက်တယ်ဆိုတာထက် ပိုပြီး Adaptive ဖြစ်လာမယ်။
ဆိုလိုတဲ့ သဘောတရားက Generation တခုပြီးတခု ပြောင်းလဲလာတဲ့ Core စီးရီး နည်းပညာတွေလို nm (Nanometer) ကျုံ့မယ်၊ Execution Unit ထပ်ထည့်မယ်လို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဥပမာ လူတယောက်ရဲ့ တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ဘယ်လို စဉ်းစားဆောင်ရွက်လဲ? အထူးသဖြင့် Brain Work နဲ့ Energy ကို မျှဝေသုံးစွဲသလို ကွန်ပျူတာတလုံးရဲ့ System Level Performance ကို Project Athena က Focus ၊ Always Ready နဲ့ Adaptive ခေါင်းစဉ် ၃ ခုနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားစေမှာပါ။
Intel အမွမ်းတင်ထားတဲ့ အသုံးနှုန်းက အသိတယဝုတ္တိဆန်တယ် ထင်ရပေမယ့် အနာဂတ် Computing နည်းပညာ တခေတ်ဆန်းလာမယ်လို့ ပြောနိုင်ပါပြီ။
ဘာလို့လဲ? ဂရိဒဏ္ဍာရီမှာ Athena ကို Goddess of Wisdom (အသိဉာဏ်ကြွယ်တဲ့ နတ်ဘုရားမ) လို့ ရည်ညွန်းသလို Intel Project ဟာလည်း စွမ်းဆောင်ရည် မထိခိုက်စေဘဲ System Level Intelligence ဘက်သွားထားတာပါ။ Focus ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကွန်ပျူတာကို တခုခုခိုင်းလိုက်လို့ ကိုယ်ကပြန်စောင့်နေရတာမျိုး ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
နောက်ပြီး Windows ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ Lid Close & Open Feature ဟာ တခါတရံ Unresponsive ဖြစ်တတ်သလို Shell Command Error တက်သွားလို့ Black Screen ဖြစ်နေတာမျိုး ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီပြဿနာကို Project Athena က Lid Close Action ကို တတ်နိုင်သမျှ အချိန်နည်းနည်းနဲ့ မြန်မြန်ပွင့်အောင် စွမ်းဆောင်ပါလိမ့်မယ် (ပိုကောင်းတာပေါ့နော် အဖုံး၊ အပိတ်လုပ်တာ နှစ်သက်သူတွေ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်တာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး)
System Adaptive ပိုင်းတွက်ဆိုရင် A.I (Artificial Intelligence) ပါလာမှာဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း Optimise ဖြစ်စေဖို့ Assist ၊ Focus ၊ Adapt နဲ့ Filter စတဲ့ Category ၄ မျိုးနဲ့ စွမ်းဆောင်မှာပါ။
အဲ့လိုဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? Intel ဆိုလိုချက်က Real World Performance မှာ ဘက်ထရီကို ၉ နာရီဆက်တိုက် အသုံးခံစေမှာပါ။
ဒီနေရမှာ Confuse ဖြစ်စေတာ Marketing ကြော်ငြာတွေနဲ့ ဘက်ထရီ ၁၂ နာရီခံပါတယ်ဆိုတဲ့ MacBook Family တွေ။ Intel ကိုယ်တိုင် Ultrabook တွေကို ၂၀၁၀ လောက်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ အပြည့်ဝ မဖန်တီးနိုင်သေးပါဘူး။
MacBook တွေမှာကျ Apple OS ကြောင့်သာ ဘက်ထရီကို ဆွဲဆန့်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုမယ့် Hardware Optimization မပါရင် ၂၄ နာရီခံပါတယ်ဆိုတဲ့ Laptop တောင် တကယ်တမ်းသုံးရင် ၄ – ၅ နာရီထက် ပိုမခံပါဘူး။
သူတို့ကြော်ငြာတဲ့ All Day Battery ဆိုတာ Air Plane ဖွင့် Brightness ကို Zero ထားပြီး ဘာမှသုံးမနေဘူးဆိုမှ ခံမယ်လို့ပြောတာပါ။ Project Athena ကတော့ ဒီစံနှုန်းကို ရိုက်ချိုးပစ်မှာဖြစ်ပြီး မိနစ် ၃၀ အားသွင်းတာနဲ့ ၄ နာရီဆက်တိုက်အသုံးခံမယ့် Fast Charging နည်းပညာလည်းပါဝင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Image Credit: EFTM
Intel Claim လုပ်ထားတဲ့9Hours ဆိုတာ Processor Voltage သွားလျော့ပြီး Clock Speed Limit လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရှိပြီးသား Hardware ကို Fine Tuning လုပ်၊ Performance နဲ့ Portability မထိခိုက်စေဘဲ Battery Boost လုပ်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Brightness တင်ပြီး Wifi နဲ့ Surfing လုပ်မယ်၊ ပုံမှန်အတိုင်းသုံးရင် Battery Drain မြန်တဲ့ Scenario အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။ Intel အနေနဲ့လည်း ပါးလွာတဲ့ Laptop ဖက် Focus ထားမှာဖြစ်ပြီး Ultrabook ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ Hyperbook လို Project Athena ရဲ့ တခေတ်ဆန်း နည်းပညာမြင်တွေ့လာရမှာပါ။
Intel အဆိုရ Laptop တခုလုံးရဲ့ ပါဝါအစားဆုံး အစိတ်ပိုင်းကို Display လို့ သိရပြီး H.264 Full HD ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကြည့်ရင် ပါဝါ ၅၀% လောက်သုံးစွဲတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ Camera-based Solution Division ကို A.I နဲ့ပေါင်းစပ်မှာဖြစ်ပြီး Biometric Log In အတွက် Tobii နဲ့ Mirametrix နည်းပညာသုံးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Windws Hello ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေတောင် Unlock လုပ်နိုင်မယ်လို့ ပြောထားပြီး လက်ရှိ Athena နဲ့ လက်တွဲထားတဲ့ Laptop တွေရဲ့ အားသာချက် တချို့ ဖော်ပြရရင်
Less than 1 second Wake Time, 10th Ice Lake Core i5/i7 (Upcoming: Tiger Lake),9Hrs+ Real Time Battery, 16 Hrs+ Video Play Back, Quick Charge support up to4Hr Battery use within 30 min charge, Thunderbolt 3, Wi-Fi 6, LTE Options, Pen Support တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
CES 2020 မှာဆိုရင်လည်း Project Athena အသုံးပြုထားတဲ့ Laptop နမူနာတွေ ထုတ်ပြခဲ့ပြီး Google Chromebook တွေလည်း ပါဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ တမျိုး ပြန်တွေးကြည့်ရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ယူဆရပေမယ့် Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 8cx SoC အသုံးပြု Windows Ultrabook တွေက ဒုက္ခပေးလာနိုင်တာကြောင့် ဖန်တီးခဲ့တာလား မပြောတတ်ပါဘူး။
သေချာတာကတော့ Ultrabook တွေ သေဆုံးဖို့ အလားလာရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်ပြီး Project Athena နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ ထပ်တိုးနိုင်ခဲ့ရင် Intel မိတ်ဆက်ဖို့ရှိတဲ့ Processor သစ်၊ နည်းပညာသစ်တွေက အချိုးကွေ့တစ်ခု ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် ထင်ပါတယ်။
Upcoming Topic: Snapdragon 8cx SoC , What is Microsoft Azure AI ၊ Nividia Ray Tracing Tech
HUAWEI Y7p မှာ ဘာတွေ ထူးခြားလာပြီလဲ?